Rita, Writing for My Sake!: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရဲ့ စကားတစ်ခွန်း
Posted by Rita at 8/24/2009 11:04:00 PM
သူငယ်ချင်းရေ.. ၁လာယူတာ :)
တို့က၂။ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရေးတာတွေ တော်တော်များများဖတ်ဖူးပေမယ့် မမှတ်မိတော့ဘူး။
မခင်မြ ရေလို့ ပြောတာဖြစ်မယ်။ ဆရာမကြီး နာမည်ရင်းက မခင်မြ လို့ မှတ်သားရဖူးတယ်။
မောင်စွမ်းရည်ရေးတဲ့ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်အကြောင်းကို မိုးမခမှာ ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းတို့ ဆပ်ပလိုင်း တပ်ကို ဂျပန်လို “ဒေါရထောဘိုထိုင်း” လို့ ခေါ်တဲ့ နေရာ သိပ်ရယ်ရတယ်။
Solly Hor!... It should be ဒေါရဘော ဘိုထိုင်း....း-)
ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ လူကြီးတဦးဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာတော့ သိပ်အားမကိုးရလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သူ့ကို သူနဲ့တန်တဲ့ စစ်ပစ္စည်းတွေ ထားရှိရာ ဆပ္ပလိုင်းရုံးမှာပဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းပို့ပြီး အုပ်ချုပ်ခိုင်းထားသတဲ့။ ကိစ္စရှိတဲ့အခါ ရုံးကို လာရတယ်။
တနေ့တော့ ဗိုလ်နေ၀င်း ရုံးချုပ် လာတယ်။ သူတို့ ဆပ္ပလိုင်းရုံးက စာတွေ ရုံးချုပ်မှာ ရောက်နေလို့ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က ကြုံတုန်း ပေးလိုက်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် “ဗိုလ်နေ၀င်းတို့ ‘ဒေါရဘော ဘိုထိုင်း’ ကစာတွေ ရောက်နေတယ်။ ကျမ ပေးလိုက်ချင်တယ် …” လို့ ဗိုလ်နေ၀င်းကို လှမ်းပြောသတဲ့။
ဗိုလ်နေ၀င်းကလည်း ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်နဲ့ ရင်းနှီးနေတော့ နာမည်ရင်း “မခင်မြ”လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ “ဟဲ့ မခင်မြ … ခုန ဘာပြောလိုက်တာလဲ။ ပြန်ပြောစမ်း …” လို့ ဆိုသတဲ့။
“ဒေါရဘော ဘိုထိုင်းအတွက် စာတွေ ၀င်နေတာ ရှိတယ် …” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့၊ ဗိုလ်နေ၀င်းက “ဒေါရဘော ဘိုထိုင်း” ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ် သိရဲ့လားလို့ ပြန်မေးသတဲ့။ “ဂျပန်လို ဆပ္ပလိုင်းရုံးလို့ ခေါ်တာမဟုတ်လား၊ သူများတွေ အဲသလို ခေါ်ကြတာကြားလို့ မှတ်ထားတာ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းက ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ အနီးကို လာပြီး ခေါင်းပုတ်ရင်း “ဟဲ့ အဲဒါ ဂျပန်လို သူခိုးဌာန လို့ ခေါ်တာဟဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်လေ၊ ငါတို့ဌာနကလည်း သူခိုးချည်းပါပဲ …” လို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောရင်း သူ့တို့ဌာနက စာတွေ ယူပြီး ပြန်သွားပါရောတဲ့။
မရီတာပြောတာရော ကိုပေါပြောတာရော မှတ်သွားပါတယ် =)
ဆရာမကြီးက အားမလိုအားမရ ဖြစ်ခဲ့ရတာ...
ရီတာ ရေးတာလေးရော.. သူများ ကောမန့်တွေပါထပ် ဖြည့်ဖတ်ရင်းရီသွားပါတယ်..း) တုံးတဲ့သူတွေပြောတာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ..း)
ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ စကားလေး
မှတ်သား သွားပါတယ် အစ်မ ကျေးဇူးပါ
ဟာသဥာဏ်ရွှင်သလားတော့ မပြောနဲ့မရီတာရေ့ .. ဆရာသော်တာဆွေက လေးစားရတဲ့ ဆရာမကြီးကိုး နော်။ သူ သောင်းပြောင်းထွေလာမှာ လစဉ် “ကိုင်း ပြောလိုက်စမ်းမယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ” ဆိုပြီး ရေးတာ ကျမတို့ လတိုင်းစောင့်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ တခွိခွိ ရယ်ရပါတယ်။ သူ့ကို သိပ်အားကျတာပဲ။ ဆရာမကြီးရဲ့ စာပိုဒ်ကလေးကို ဖြန့်ဝေ ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ “တချို့တွေ တုံးတာတော့ ငါဖြင့် ဥာဏ်ကို မမီဘူး” တဲ့လား .. (တဟားဟား အော်ရယ်မိပါတယ်)
ကိုပေါလဲစုံတယ်။ ရီတာလဲ စာဖတ်အားကောင်းတယ်။ ပုဂံသူရဲကောင်းကိုဖတ်ဘူးတယ်။ အထင်ကြီးစရာကောင်းအောင်ရေးထားတာ မှတ်မိတယ်။ ကျွန်တော့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကတော့အသဲစွဲ။ အိမ်ကရှူမဝလစဉ်ယူပြီးသိမ်းထားတယ်။ သော်တာဆွေ ကအဲဒါရေးမယ်ဆိုတော့ ရှူမဝ ဦးကျော်က တရာပြည့် အောင်ရေးနိုင်ပါ့မလားမေးဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခန်းတရာပြည့် တော့ ဦးကျော်ကသေးပြီးနေပြီတဲ့။
သော်တာဆွေကလူပျော်ကြီး။သိမှာပေါ့ ခုနှစ်မိုင်ရွာတန်းရှည်မှာနေခဲ့တယ်။ အိမ်က ဒရိုက်ဗာကလဲ ခုနှစ်မိုင်ရွာတန်းရှည်ကပဲ။ တရက် သူတို့တွေ အိမ်တအိမ်မှာ စုပြီးဖဲရိုက်နေတုန်း သူ့မိန်းမ "မေ"ရောက်လာပြီး ဖဲချပ်တွေကို စုတ်ဖြဲပါရောတဲ့။ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ သော်တာဆွေ ကထပြီး ဖနောင့်နဲ့ ပိတ်ကန်ပြစ်တာတဲ့။ သော်တာဆွေ အဲဒီအကြောင်းတော့သူ့စာထဲ ထည့် ရေးတာမတွေ့မိသလိုပဲ။ :)